Naya Bikalpa | अनुसन्धानमा पछि परेको प्रहरी प्रशासन - Naya Bikalpa अनुसन्धानमा पछि परेको प्रहरी प्रशासन - Naya Bikalpa
अनुसन्धानमा पछि परेको प्रहरी प्रशासन
प्रकाशित मिती: २०७६ श्रावण १३, १०: २५: ३५
बलात्कारपछि हत्या भएको कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएको पनि एक वर्ष बित्यो । दर्जनौं अनुसन्धान समिति बनाउँदै प्रतिवेदन तयार गरेर गृह प्रशासनले एक वर्ष बिताएको छ । ३३ किलो सुनदेखि गुण्डा नाईकेहरुलाई ठाउँको ठाउँ ठहरै पार्न सफल नेपाल प्रहरी कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन भने असफल हुँदै आइरहेको छ ।
पीडितले आफ्नो बालिकाको हत्यारा पत्ता लगाई दिन गरेको अनुरोधलाई समेत निकै हलुका तवरले लिँदा सो घटना रहस्यमय बन्दै गएको गुनासो सुरुका दिनदेखि नभएका होईनन् । बलात्कारपछि हत्या भईसकेको अवस्था र हत्या प्रकरणका विभिन्न तथ्यहरु समेत प्रहरीबाट लार्पावाही भएको कारण आजसम्म हत्यार पत्ता लाग्न नसकेको विषय जटिल बन्दै गएको र हत्यारा अनुसन्धानको घेरामा पर्न नसकेको अनुमान भईरहेको छ ।
प्रहरी प्रशासनले त्यति चाख दिएन भन्ने जनगुनासो रहँदै आएको छ । बालिकाको अपहरणपछि बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या समेत भएको र पुरै कञ्चनपुरवासी आक्रोसित भएको यस्तो संवेदनशील विषयमा गृह प्रशसन र प्रहरी प्रशासनले जनविश्वास गुमाइरहेको रहेको छ । त्यसले गर्दा यो विषयमा वर्तमान प्रहरी प्रशासनमाथि निकै ठुलो धक्का लागेको छ ।
यस्तो अवस्थामा वर्तमान गृह प्रशासन र सिंगो प्रहरी प्रशासनको शाखमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भईरहेको छ । समाजमा भएका जघन्य अपराध, तस्करी, हत्या, हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धान गर्न समेत पछि नपर्ने प्रहरी प्रशासन निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा चुकी रहेको छ । कञ्चनपुरवासीको मात्र विषय नभएर यो हत्या प्रकरण सामाजिक सुरक्षाको ठुलो चुनौति बनिरहेको छ । घटनामा प्रहरी प्रशासन किन यति कमजोर भयो ?
यस्तैयस्तै प्रकरणका कयौं घट्ना महिनौ दिनको अनुसन्धानबाट पत्ता लगाउन सफल भएको तथ्यहरु हामीसँगै छदैछ । भक्तपुरको बालक अपहरण काण्डदेखि, गुण्डा नाइके घैंटे प्रकरणका दर्जनौ अपराधिक घटनाहरु पत्ता नलागेका होइनन् । सनम हत्या प्रकरण, ३३ किलो सुन तस्करी लगायत अन्य ठुला–ठुला लागु पदार्थ कारोबार ओसार–पसार गर्ने गिरोहलाई समात्न सफल नेपाल प्रहरी एउटा बालिकाको बलात्कार पछि नर्कटघारीमा भएको हत्या पत्ता लगाउन नसक्दा जनविश्वास गुमाउन पुगेको छ ।
करिब छ दर्जन डिएनए र पाँच सय पचासको हाराहारीमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सोधपुछ गरिएको प्रतिवेदन तयार पारेर मात्र निर्मला हत्या प्रकरणले उन्मुक्ति पाउला प्रहरी प्रशासनले ? गृह प्रशासनले अनुसन्धान समिति बनाउने र प्रतिवेदन बुझ्ने काम गरेर मात्र गृहमन्त्रीले यो प्रकरणबाट जनताले न्याय पाएका छन् भन्नु कतिको जायज होला ?
निर्मला पन्त हत्या प्रकरण किन, कसरी, के का लागि कोबाट यस्तो जघन्य अपराध भएको हो ? सोको यथार्थ जानकारी अथवा हत्यारा पत्ता जबसम्म लाग्दैन, तबसम्म यो प्रकरण त्यसै सेलाउन सक्ला र ? पदासिन व्यक्ति त्यसमा पनि गृह प्रशासन सम्हाल्ने व्यक्तिको विवादस्पद भनाईलाई नेपाली समाजले पचाइरहेको छैन । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा भएको आक्रोश साम्य पार्न नेपाल प्रहरीले ठुलो शक्ति खर्च गर्नु परेको यो प्रकरण त्यसै सेलाउने हो भने पीडितले कहिले न्याय पाउने ? पीडितले न्याय नपाउनु भनेको अपराध बढ्नु हो ।
यस्ताखाले जघन्य अपराधको खोजी कार्यमा सबैको सहयोग सद्भाव बटुलेर प्रहरी प्रशासनले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । ढिलै भएपनि यथार्थ जानकारी जन समक्ष लेराउन सके मात्र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो साख उचो राख्न सफल होला ।
२०७६ श्रावण १३, १०: २५: ३५